Xisbul Islaamkii burburay oo dhaleeceeyey Hogaamiyaha Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Xoghayaha arrimaha dibadda ee ururkii burburay ee xisbul Islaam, Maxamed Macalim ayaa dhaleeceyn kulul u jeediyey xarakada Alshabaab oo ay horay isku mowqif u ahaayeen.
Shir jaraa’id oo uu Maxamed Macallin ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ku eedeeyey Alshabaab iney geystaan falal lagu leynayo dad waxgal u ah bulshada Soomaaliyeed, isagoo dhanka kale dowladda Soomaaliya ka codsaday iney sii deyso Sheekh Xasan Daahir Aweys oo xabsi guri kaga jira Muqdisho.
Maxamed Macallin ayaa ku billaabay shirkiisa jaraa’id dhaleeceyn uu u jeediyay hoggaamiyaha guud ee Al-shabaab, Sheekh Mukhtaar C/raxmaan (Abuu-Zubeyr) oo magaciisa saxda ah lagu sheegay Axmed Cabdi Godane, kaasoo uu sheegay inuu bixiyo amarro lagu laynayo dad shacab ah ee Soomaaliyeed.
“Hoggaamiyaha Al-shabaab waxaa bixiyaa amarro lagu leynayo dadka wax-galka u ah bulshada Soomaaliyeed, sida culummada, aqoonyahannada iyo dhakhaatiirta,” ayuu shirkiisa jaraa’id ku yiri Maxamed Macallin.
Wuxuu xoghayaha arrimaha dibadda ee ururkii Xisbul Islaam sheegay in ururkoodu wadahadal la gelayo cid walba oo mudan in lala fariisto gudaha iyo dibadda meeshii ay doonto haku sugnaatee, iyadoo laga wada hadlayo xaaladda dalka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii Maxamed Macallin ayaa warbaahinta u akhriyey qodobo kazoo baxay ururkoodii burburay, waxeyna ahaayeen sidan:
1- Waxaan caddeynayaa inaan kasoo horjeedo mowqifka guracan ee hoggaamiyaha Al-shabaab Axmed Cabdi Godane.
2- Haddii aanu nahay Xisbul Islaam waxaan kasoo horjeednaa joogitaanka ciidanka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya.
3- Xisbul Islaam wuxuu diyaar u yahay wada-xaajood kasta oo dalka horumar lagu gaarsiinayo.
4- Ururka Xisbul Islaam wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in laga wada-shaqeeyo midnimada iyo ka hortagga in dalka lala wareego.
5- Ururku wuxuu dowladda Soomaaliya ugu baaqayaa inay xabsiga kasii dayso Sh. Xasan Daahir Aweys.
Uruka Xisbul Islaam ayaa si rasmi ah ugu biiray Al-shabaab sannadkii 2010-kii taas oo keentay in gabi ahaan ururkaas uu burburo, waxaana sanadkii hore Sheekh Xasab Daahir oo xisbigaas hogaamin jiray uu ka baxsaday Alshabaab, wuxuuna gacanta u galay dowladda Soomaaliya.
Group of ministers reach Baidoa